Jubbaland oo shuruud ku xirtay doorasho lagu qabto degaannada Maamulkaas - Awdinle Online
Jubbaland oo shuruud ku xirtay doorasho lagu qabto degaannada Maamulkaas
Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay Arrimaha doorashooyinka kusoo fool leh dalka oo ay kamid yihiin doorashooyinka Baarlamaanka labada Aqal ee la filayo inay ka dhacaan meelo ay kamid yihiin Muqdisho & dowlad goboleedyada ay kamid tahay jubbaland.
Sidoo kale jubbaland waxaa ay sheegtay in qeyb weyn kasoo qaadateen shirarkii looga hadlayay Arrimaha doorashooyinka dalka, taas oo ugu dambeyn sababtay in heshiis doorasho lagu gaaro 17-kii bishii siteember Magaalada muqdisho.
Madaxtooyada jubbaland oo sigaar ah uga hadashay Arrimaha doorashooyinka Baarlamaanka ee la filayo in lagu qabto degaannada Jubbaland ayaa waxaa ay sheegtay inay dalbanayaan in gacanta Maamulka lagu soo celiyo Gobolka Gedo si ay ugu qabtaaan doorashada.
“ Dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ay dalbaneeysaa in gacanta dowlad goboleedka lagu soo celiyo maamulka, garsoorka iyo Amniga Gudaha gobolka Gedo, taas oo Ciidamo u abaabulan qaab jabhadeed oo ka amar qaata saraakiil ka tirsan NISA la wareegeen muddo hadda laga joogo 10 Bilood, isla markaana aysan doorasho ku qaban karin meel aan sharci iyo kala dambeyn ka jirin sida hadalka loo dhigay.
Ugu dambeyn Maamulka Jubbaland ayaa ugu baaqay Ummadda Soomaaliyeed uga garnaqaan caqabadaha uu wadanka wajahayo, sidoo kale inay Beesha Caalamka markhaati ka noqoto xaalada cakiran ee xilligan si looga baaqsado khalqal amni qalalaase siyaasadeed iyo firaaq dastuuri ah.
Warkaan kasoo baxay Madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan Madaxweynaha Jubbaland uu si cad u sheegay in doorasho ku qabneyn degaannada Jubbaland ilaa inta gacanta ku heynta gobolka Gedo loogu wareejinaayo, waxaana taasi ay keentay in dowladda Soomaaliya ay ka carooto hadalka Axmed Madoobe, isla markaana ay dalka ka saartay safiirkii Kenya una yeertay safiirka Soomaaliya ee Kenya, iyada oo sheegtay in ay faragelisay Arrimaha Soomaaliya, isla markaana Axmed Madoobe ay ku cadaadisay Go’aanka uu qaatay.
Previous articleShan qof oo lagu dilay Shabeellaha Hoose & xiisad ka taagan
Next articleCiidamo Itoobiyan ah oo ku dagaalamay Gobolka Hiiraan